९० मिनेटपछिको निद्राले निर्णय क्षमता बढाउँछ ? – Annapurna Post News
June 20, 2022 sujaLeaveaComment on ९० मिनेटपछिको निद्राले निर्णय क्षमता बढाउँछ ?
मस्तिष्कलाई सही तरिकाले काम गर्न निन्द्राको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वैज्ञानिकले हालै आम मानिसको र्‍यापिड आई मुभमेन्ट (आरईएम) निन्द्राका माध्यमबाट भावनात्मक यादलाई मजबुत बनाउने कुरा पत्ता लगाएका छन् ।वैज्ञानिकले गरेको अध्ययनले निन्द्राले मस्तिष्कको न्युरोनल एक्टिभिटीलाई शान्त बनाउने काम गर्ने पत्ता लगाएको छ ।
के हो आरईएम ?-आरईएम निन्द्राको एक चरण हो, जुन निदाएको ९० मिनेटपछि सुरु हुन्छ । यसै समयमा मानिसले सपना देख्ने गर्छन् । निदाएको ९० मिनेटपछिको समयमा हाम्रो शरीरका मांसपेशीहरु स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहन्छन् ।
आरईएम निन्द्राले न्युरान्सलाई शान्त बनाउँछ-प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स मस्तिष्कको त्यो भाग हो, जहाँ भावनात्मक प्रक्रिया रहने गर्छन् । र्‍यापिड आई मुभमेन्टले मस्तिष्कको पिरामिडल न्युरान्स निकै शान्त रहने वैज्ञानिकले अनुसन्धानमा खुलाएका छन् ।
निन्द्राको समयमा मस्तिष्कको कुनै भागले कसरी हाम्रा भावनालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने कुरामा वैज्ञानिकलाई विश्वास गर्न गाह्रो भएको थियो । कारण त्यतिबेला मस्तिष्क सक्रिय हुँदैन थियो ।
आरईएम निन्द्रामा भएको बेला शरीरको पूरै सिस्टमलाई रिसेट गर्न सकिने अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसको अर्थ राम्रो निन्द्राले सही र गलत छुट्याउने क्षमतामा सुधार हुँदै जान्छ । यस्तोमा मस्तिष्कसम्म पुगेको सन्देश अगाडि बढ्दैन ।
र्‍यापिड आई मुभमेन्ट दौरान आएको निन्द्रामा मस्तिष्कसम्म कुनै सन्देश नपुग्ने भने होइनन् । तर न्युरान्सले ती सन्देशलाई अगाडि बढ्न दिंदैन । आरईएममा मस्तिष्कमा भएका सन्देशलाई न्युरान्सले एक भागमा पुर्‍याउने भए पनि अर्को भागमा पुर्‍याउँदैन ।
यो अनुसन्धान सुरुमा मुसामा गरिएको थियो । वैज्ञानिकहरु मुसामा गरिएको अनुसन्धानको परिणामलाई लिएर मान्छेको निन्द्रालाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
वैकल्पिक चिकित्सा के लाई भन्दछन् ?